Safari 15.1 beta wuxuu ku darayaa ikhtiyaarka tabs leh naqshad hore ee macOS Catalina iyo Big Sur | Waxaan ka imid mac
Safari 15.1 beta waxay ku darsataa tabaha qaabkii hore ee macOS Catalina iyo Big Sur
Sida macOS Monterey oo ku jirta nooca Baahinta Musharraxa Sii -daynta (RC) oo la bilaabay dhacdadii Apple Isniintii, Oktoobar 18, nooca ugu dambeeyay ee Safari 15.1 ee macOS Big Sur iyo macOS Catalina Waxa kale oo ay muujinaysaa tabyada leh nashqad ka hor ta hadda jirta. Tani waxay ka dhigan tahay in adeegsadayaashu ay awoodi doonaan inay doortaan ikhtiyaarka maaraynta tab ee adeegsadayaasha aan u hagaajin Safari 15 ay leeyihiin.
Sideedaba ikhtiyaarka tab ee hadda jira ayaa sidoo kale la heli doonaa kuwa aan doonayn inay is beddelaan. Waxa aan halkaan ku hayno waa ikhtiyaar qaab beddelid oo xiiso leh oo loogu talagalay kuwa aan weli si fiican ula qabsan qaabka cusub ee maareynta tabyada ku jira biraawsarka Apple.
Waxaa muhiim ah in la yiraahdo ikhtiyaarka maareynta tab ayaa loo bixiyaa beddel ahaan qaababka noocaan beta, sidaa darteed mid kastaa wuxuu awoodi doonaa inuu doorto nooca naqshadeynta baalasha ee ay doorbidaan. Muranka ayaa kiciyay ka dib markii cusboonaysiinta biraawsarka laga yaabo in maalmihiisa la tiriyo. Qaabkan cusub ee tabsku waa run inay xoogaa ka sii adkaan karto sidii loo maareyn lahaa marka loo eego kii hore ee Safari, laakiin sidoo kale waxay leedahay dhibco u roon.
Horumarinta diiwaangashan ayaa soo dejisan kara oo rakibi kara faylka Nooca cusub ee beta ee Safari 15.1 adoo galaya Xariirka Soo Dejinta ee Apple Developer iyo helitaanka menu Downloads. Caqli ahaan, si loogu rakibo noocaan Safari 15.1 waxaa lagama maarmaan ah in la rakibo nooca ugu dambeeyay ee ‌macOS Big Sur‌ ama macOS Catalina.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Safari 15.1 beta waxay ku darsataa tabaha qaabkii hore ee macOS Catalina iyo Big Sur
Apple's charger 140W wuxuu adeegsadaa farsamada GaN
Box Drive waa la cusboonaysiiyay si uu ula jaanqaado Apple Silicon